ABUU HUREYRA AL-DOWSI
Wuxuu Abuu Hureyra ku dadaali jiray inuu dadka ugu yeero sidii ay ugu baari-fali lahaayeen waalidiintooda, iyo xiriirinta qaraabadooda. Waxaa hadalladiisa ka mid ahaa hadalkan: "hal meel ma wada harsanayno anniga iyo kan qaraabadiisa gooya". Wuxuu maalin maalmaha ka mid ah arkay labo nin oo wada socda, oo kala da’ weyn. Wuxuu kii yaraa weydiiyay waxa uu kan kale u yahay, wuxuuna ku yiri: “waa aabahay”. Haddaba wuxuu Abu Hureyra ninkii ku yiri: “magaciisa ha ugu yeerin, hortiisana ha socon, hana fariisan hortiisa.
Markii uu Abuu Hureyra xanuunsaday bukaankii dhimashadiisa ayaa uu ooyay, waxaana lagu yiri maxaad la ooyaysaa?. Wuxuu yiri, lama oynayo cabsida aan ka qabo dunidan tan ah, hase ahaatee waxaan la ooyay safarka dheer ee i sugayo, iyo saadka iyo sahayda yari ee aan wato. Waxaan istaagay dhammeystirka waddo, taasoo ii sii kaxeynaysa Janno ama Naar, mana ogi labadaas meelood meesha aan ku danbeyn doono. Waxaa Abuu Hureyra soo booqday Marwaan Binu Al-Xakam, isagoo ku leh: Abuu Hureyrow Allaha ku shaafiyo. Wuxuu Abuu Hureyra ku Alla baryay ducadan, wuxuuna yiri: “Illaahayow waxaan jeclahay la-kulankaaga ee waxaad adiga jecaataa la kulankayga, iina soo deddeji inaan kula kulmo". Maba uusan Marwan ka bixin gurigii jeer uu ka geeriyoodo Abuu Hureyra. Illaah ha u naxariisto Abu Hureyra raxmad waasic ah, wuxuu ummadda muslimiinta u xafiday wax ka badan kun iyo lix boqol iyo sagaal xaddiis kana mid ah axaadiista Rasuulka (scw), Ilaahay Islaamka iyo Muslimiinta ha uga jazeeyo kheyr, aamiin
Daabacaad: September 4 2001